Home Wararka Wasiirka Gaashandhigga Eriteriya oo ka badbaaday isku day dil
Wasiirka Gaashandhigga Eriteriya oo ka badbaaday isku day dil
Wasiirkii hore ee Gaashandhigga horeyna u ahaa taliyihii ciidanka Eriteriya Gen. Sebhat Efrem aya ka badbaaday isku day dil. Gen. Sebhat Efrem aya waxaa soo gaaray dhaawac culus oo uu hadda isbitaal la jiifo.
Madaxweynaha Eriteriya aya bilaabay in uu qaarajiyo dhammaan saraakiisha uu ka shakisan yahay, isagoo cabsi weyn ka qaba in afgembiya. Dhamaan qurba joogta iyo saraakiisha sar sare ee ciidamada aya aad uga soo horjeeda qorshaha is dhex galka uu wado RW Itoobiya Abiy Axmed iyo Kaligii taliska Eriteriya Afewerki.
Dowladda Eriteriya aya qarineysa isku dayga dilka Taliyihii hore ee ciidamada oo xiriir dhow la leh saraakiisha iyo ciidanka Eriteriya, taasoo keentay in la isku dayo in la dilo balse uu ka badbaaday.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo ka tirsan taliska Asmara, kuwaasoo codsaday in aan magacooda la sheegin aya laga soo xigtay in ay aad uga welwelsan yihiin amnigooda, waxayna sheegeen in aanay ogeyn ama war u hayn qorshaha Afawerki iyo ficilada uu damacsan yahay toona.
Waxaan ku jirnaa xaalad aad cakiran ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Eriteriya. “Waa iska caddahay qisada jaceyl ee ka dhexeysa Abiy iyo Afawerki, oo hadda isku bedeshay musalmusal caashaq, taasoo aanan garaneyn gunta halka ay ku socota iyo sida uu noqon doono mustaqbalka Eriteriya” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay.
Shaki kuma jiro in Eriteriya ay galayso xaalad murugsan, waxaana dadka aadku ugu dhow siyaasadda geeska Afrika ay saadaalinayaan in muddo aan dheereyn ay soo foodsaari doonto Madaxweynaha Eriteriya xaalad cakiran iyo kacdoon shacab oo aanu xakameyn kariin.
Previous articleEritrean Intelligence establishes bases in Somalia and Ethiopia
Next articleWar Murtiyeed Xildhibaanadii Moshinka ka Noqday.
Taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland oo maanta iscasilay
Faroole oo Weerar ku Qaaday Madaxda Taabacsan Farmaajo